Accueil > Gazetin'ny nosy > Ambatofinandrahana: Natakalon’ny fanjakana ondry ny omby
Ambatofinandrahana: Natakalon’ny fanjakana ondry ny omby
Malaza amin’ny fiompiana omby ny distrikan’Ambatofinandrahana. Izany no antony isian’ny asan-dahalo sy halatr’omby amin’ity distrika ity. Ny kaominina eo any amin’ny ilany andrefana no tena mpiompy omby.
Ny omby dia tsy vitan’ny hoe harena ihany fa mirakitra ny kolontsaina koa amin’ny toerana iny: “velona miaraka amin’ny omby, ary maty milofo omby” izany no filamatra any amin’ity distrika ity. Fitahirizana koa ny omby ka sady harena no voninahitra.
Ho rava nefa izany zavatra rehetra izany satria natakalon’ny fanjakana ondry ny omby any amin’ny distrikan’Ambatofinandrahana ankehitriny. Ny talata faha 07 novambra 2017 teo dia manomboka ny hetsika hizarana ny ondry miisa 600 avy amin’ny tetikasa AROPA ao Ambositra sy ny fanjakana Malagasy hizara ondry miiisa 600 any amin’ny distrikan’Ambatofinandrahana dia Mandrosonoro sy Amborompotsy ary Mangataboahangy. “Ny kilonga mifaly raha hita, moa ny lehibe misikidy anakapo” hoy ny ohabolana betsileo. Sahiran-tsaina ny raiamandreny sy ny mpitazona ny soatoavina any an-toerana noho izany. Ny fiompiana omby no tokony ho hatsaraina sy harovana amin’ny asan-dahalo izay fototra manimba ity fiompiana ity. Nahoana no tsy afaka miady amin’izany ny fanjakana? Fanapotehana ny vakoka sy ny fomba no ilazan’ny olona mpitazona ny fomba nentin-drazana izao any amin’ity distrika ity. Fanapotehana ny fomba tanteraka no dikan’izany hoy ny resaka mandeha etsy sy eroa. Misy mihitsy aza no milaza fa tetika ataon’ny fanjakana hanafoanana ny fiompiana omby gasy izao, izay iarahany amin’ny fanjakana vahiny. Tamin’ny andro nitondran’ingahy Ravalomananan Marc iny dia isan’ny olana teo amin’ny tantsaha ny mahakasika ny fampidirana omby beronono teto Madagasikara nataon’ity filoha iteo aloha ity.
Ny ady amin’ny dahalo no angatahan’ny olona amin’ny fanjakana amin’ny fiompiana omby fa tsy ny fanovana ny omby ho ondry indray toa ny misy any amin’ny distrikan’Ambatofinandrahana izao.